ऋतिक रोशन : नशा-नशामा बलिउड
'आशा' देखि सुरु गरेको करियर मोहनजोदड़ो सम्म आइपुगेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २६ मंगलबार , ४,०२९ पटक हेरिएको
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले मंगलबार जन्मदिन मनाएका छन् । उनलाई विश्वभरबाट शुभकामना दिने को ओइरो लागेको छ । ४३ बर्षिय ऋतिक रोशनको जन्म १० जनवरी १९७४ मुम्बईमा भएको थियो । ऋतिक चर्चित निर्माता- निर्देशक राकेश रोशनका छोरा हुन् । ऋतिकले फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफ्नो निर्माता बुवा राकेश रोशनसँग असिस्टेन्ट डायरेक्टरको रुपमा काम गर्न सुरु गरेका हुन् ।
ऋतिकले सन् २००० मा 'कहो न प्यार है' बाट लीड हीरोको करियर सुरु गरे । त्यसपछि 'कोई मिल गया', 'कृष', 'कृष-३' 'मोहनजोदड़ो' जस्ता शानदार चलचित्र अभिनय गरेर उनि बलिउडमा स्थापित भए ।
ऋतिक रोशनले फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक बाल कलाकारको रूपमा सुरु गरेका थिए । उनि १९८० को चलचित्र 'आशा' मा बाल कलाकारको रुपमा अभिनय गरे । यस बाहेक उनले , 'आपके दीवाने' (१९८०), 'आसपास' (१९८१) र 'भगवान दादा' (१९८६) जस्ता चलचित्रमा देखिए ।
उनले २० डिसेम्वर २००० मा सुजैनसँग विवाह गरे । विवाहको ६ बर्षपछि उनिहरुको पहिलो सन्तान ऋहान र दोस्रो २००८ मा ऋदानको जन्म भयो । १३ डिसेम्बर , २०१३ मा ऋतिक- सुजैनले १७ बर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्त्य गरे ।
टाइगरको स्टन्ट देखेर चकित परे अक्षय कुमार
इर्फान खान गम्भीर बिमार, के भयो ?
वरुण बने बलिउडको ७ औँ ठूलो सुपरस्टार, उनि भन्दा अगाडि को ?
बलिउड कलाकार सञ्जय दत्त चलचित्रमा फर्किए
साहिर लुधियानवीको वायोपिकमा ऐश्वर्या-अभिषेक
गर्भवती ईशा देवलले पुन: विवाह गर्ने !
नाना पाटेकर अर्कैसँग सल्किएपछि भड्किएकी थिइन् मनीषा
श्रीदेवीसँग प्रत्येक चलचित्रमा काम गर्न चाहान्थे जितेन्द्र
अभिनेता दिलीप कुमार अस्पताल भर्ना, एमर्जेन्सीबाट जनरल वर्डमा झारियो